December 28, 2019 - Hargeele - Wararka Somali State
Home 2019 December 28
Cayaaraha December 28, 2019
(England) 28 Dis 2019. Manchester United ayaa saddexda dhibcood ka soo qaadatay kooxda Burnley oo ay ku booqatay garoonka Turf Moor, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-2, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 20-aad ee horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Manchester United. Daqiiqadii […]Sii akhriso
Madaxweynaha Turkiga oo cambaareeyay qarixii bahalnimo ee maanta
Soomaaliya December 28, 2019
Muqdisho(SONNA) Madaxda Dowladda Dalka Turkiga ayaa si kulul u dhaleeceeyay weerarkii kooxaha argagixisadu ay ka geysteen Muqdisho,kaasi oo ay ku dhinteen dad badan oo rayid ahaa,halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Madaxweynaha Dalka walaalaha aanu nahay ee Turkiga Raccep Tayid Erdogan ayaa cambaareeyey qaraxaasi bahalnimo oo loo soo maleegay shacabka,isagoo tacsi ku Sii akhriso
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo isbitaalada ku booqday dhaawacyada qarixii maanta+sawirro
Muqdisho(SONNA) Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal sheekh Cabdiraxmaan ayaa caawa isbitaalada ku booqday dhaawacyada dadkii dhibaatadu ka soo gaartay qaraxii maanta ka dhacay Ex control Afgooye Mudane Maxamed Mursal sheekh Cabdiraxmaan Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo ay la socdeen xubno katirsan xildhibaannada golaha shacabka iyo wasiirro ayaa mid mid u booqday Sii akhriso
(Turin) 28 Dis 2019. Kooxda Juventus ayaa diiday inuu u ogolaado mid ka mid ah xiddigahiisa inuu ugu biiro kooxda Arsenal qaab amaah ah ilaa iyo dhamaadka xilli ciyaareedkan. Sida laga soo xigtay wargeyska “’The Sun” ee dalka Ingiriiska, kooxda Juventus ayaa diiday inay amaah ku bixiso xiddiga qadka dhexe reer France ee Adrien Rabiot bisha […]Sii akhriso
Somali News December 28, 2019
Mogadishu(SONNA) The State of Qatar has expressed its strong condemnation and denunciation of a bombing in the Somali capital, Mogadishu that resulted in dozens of deaths and several injuries. In a statement Saturday, the Ministry of Foreign Affairs reiterated the State of Qatar’s firm position of rejecting violence and terrorism, regardless of motives and reasons. […]Sii akhriso
(England) 28 Dis 2019. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Burnley Iyo Manchester United kulanka goor dhow soo gali doona ee horyaalka Premier League. Hadaba dhanka hoose kaga boggo Shaxda rasmiga ee kooxaha Burnley Iyo Manchester United: Burnley XI: Man United: Gool FM.Sii akhriso
Dowladda Qatar oo cambaareysay qarixii argagixisanimo ee shacabka lala beegsaday
Muqdisho(SONNA) Dowladda Qatar oo kamid ah wadamada saaxiibka dhow la ah Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareysay qarixii argagixisanimo oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho,kaasi oo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawacba uu ka soo gaaray dad shacab ah. War qoraal ah oo ka soo baxayy wasaaradda Arrimaha dibadda dowladda dalkaasi Qatar ayaa lagu sheegay […]Sii akhriso
Dowlada Turkiga oo gar gaar deg deg ah u soo dirtay Soomaaliya
Muqdisho.(SONNA):- Dawladda Turkiga ayaa gargaar deg deg ah u soo dirtay Soomaaliya, kadib dadkii Soomaaliyeed ee ku waxyeelloobay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Diyaarad millatariga dalkaasi leeyahay ayaa goordhaweyd oo maanta ah ka soo duushay magaalada Kayseri, iyada oo sida gar gaar deg deg ah oo loogu talagalay dadka waxyeelada soo gaartay. War ka […]Sii akhriso
Jurgen Klopp oo fariin digniin ah u diray Van Dijk kahor kulanka Wolverhampton
(Liverpool) 28 Dis 2019. Macalinka kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa kaga digay daafaciisa birta ah reer Holland ee Virgil van Dijk halista kaga imaan karta weeraryahanka Wolverhampton ee Adama Traoré, ka hor inta aysan labada kooxood kulmin habeenka Axada. Jurgen Klopp iyo wiilashiisa ayaa isku diyaarinaya inay ku wajahaan kooxda Wolverhampton ciyaar ka Sii akhriso
Halyeeyga kooxda Real Madrid ee Hugo Sánchez oo hal arrin ka codsaday Florentino Perez
(Madrid) 28 Dis 2019. Halyeeyga Real Madrid ee Hugo Sánchez ayaa ka codsaday madaxweynaha kooxda ee Florentino Perez inuu sameeyo saxiixa xiddiga naadiga Tottenham Hotspur ee Harry Kane. Hugo Sánchez ayaa aaminsan in hadii uu xukunka gacantiisa ku jiri lahaa inuu la saxiixan lahaa Harry Kane, xitaa haddii ay kaga bixi laheyd heshiiskiisa qiimo dhan 200 […]Sii akhriso